မြန်မာ, 18 အောက်တိုဘာ 2017 page 1
18 အောက်တိုဘာ 2017 ဗုဒ္ဓဟူး
အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကနေ သောင်းချီတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေ အိမ်နီးချင်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထွက်ခွာနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ မဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR က ဒီကနေ့ပဲ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေကတော့ နေရပ်ကိုမစွန့်ကြဖို့ တိုက်တွန်းနေတဲ့ကြားက ထွက်ခွာနေကြတာလို့ ပြောဆိုခဲ့တာပါ။
ရခိုင့်ပဋိပက္ခလူသားချင်းစာနာမှု အလှူရှင်ညီလာခံ ဂျာနီဗာမှာကျင်းပဖို့ စီစဥိ
အချိန်ကာလ ၅ပတ်မပြည့်ခင်မှာပဲ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်ကိုထွက် ပြေးလာကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေက ၅သိန်းကျော်သွားပြီလို့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်း ကြီး Filippo Grandi နဲ့ လူသားချင်းစာနာမှုအရေးနဲ့ အရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့လက်ထောက် အတွင်းရေး မှုးချုပ် Mark Lowcockတို့ ပူးတွဲထုတ်ပြန်တဲ့ မနေ့ကကြေညာချက်ထဲမှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။
နေပြည်တော်လေဆိပ် လက်နက်မိတဲ့ကိစ္စကိုင်တွယ်မှုအပေါ် ပြည်ပ တုန့်ပြန်
အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့က နေပြည်တော်လေဆိပ်မှာ မူးယစ်ဆေးတွေနဲ့အတူ ပစ္စတိုလက်နက်တွေကို ပါတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွက် ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ အားကစားဝန်ကြီးဟောင်းသား ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းနဲ့ အပေါင်းပါ ၃ ဦးကို မူးယစ်ဆေး ပုဒ်မနဲ့ အရေးယူထားပြီး အမှုကို ဆက်လက် စစ်ဆေးနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဥရောပကောင်စီက တနင်္လာနေ့မှာ ချမှတ်လိုက်တဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက် အရေးပါတဲ့ အခြေခံ ဆုံးဖြတ်ချက်တခုဖြစ်ကြောင်း အီးယူ နိုင်ငံခြားမူဝါဒရေးရာ အကြီးအကဲ Federica Mogherini က ပြောကြား လိုက်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လုံခြုံရေး တပ်အင်အား အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကြောင့် ဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေက မြန်မာ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့ တပ်မတော် အကြီးတန်း တာဝန်ရှိသူတွေကို ဖိတ်ကြားမှု ဆိုင်းငံ့ထားမှာ ဖြစ်သလို လက်ရှိ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်း ပြန်လည် သုံးသပ်မယ်လို့ ဥရောပ ကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအတွက်ချေးငွေ ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဆိုင်းငံ့
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက်ကို ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည် ၅ သိန်းကျော် ထွက်ပြေးခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ မြန်မာအစိုးရအပေါ် နိုင်ငံတကာရဲ့ ဖိအားပေးမှုတွေ တိုးမြင့်လာနေချိန်မှာဘဲ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ကလည်း မြန်မာနို်င်ငံကို ချေးမယ့် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ကို ဆိုင်းငံ့ထားလိုက်ကြောင်း အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲနဲ့ ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
နေပြည်တော်လေဆိပ် လက်နက်မှုနဲ့ဆက်နွယ်ပြီး ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုများရှိဆဲ
နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ တရားမ၀င်လက်နက် ၊ မူးယစ်ဆေးဝါးဖမ်းမိတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး သံသယရှိတဲ့လူတွေကို ဆက်လက်ခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်လျက်ရှိတယ်လို့ တာဝန်ရှိသူတွေက ပြောပါတယ်။ ဒီလိုလက်နက်တွေ ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း ဒီကနေ့မှာတော့ ဖြိးကိုကိုတင့်ဆန်း ရုံးအဖွဲ့ ၅ ဦးကို ခေါ်ယူစစ်ဆေးမှု ဆက်လက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတယ်လို့ နေပြည်တော်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူး ဇော်ခင်အောင်က VOA ကိုပြောပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းများ အကျယ်တ၀င့်မဖြစ်ဖို့ တပ်ချုပ်လိုလား
NCA တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေစုဖွဲ့ထားတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ (PPST)ဟာ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီးမင်းအောင်လှိုင်တိုနဲ့ ဒီနေ့မှာ သီးခြားစီတွေ့ဆုံပြီး NCA ပါ ငြိမ်းချမ်းရေးသဘောတူညီချက်များ အကောင်အထည်ဖော်ရေးကိစ္စရပ်တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ကုလနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲ ရခိုင်အရေး မြန်မာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ဆွေးနွေး
ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဟောင်းကိုဖီအာနန်ဦးဆောင်တဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ကုလသမဂ္ဂတို့အကြား ပူးပေါင်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ဖို့ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ ကုလနိုင်ငံရေးရာဌာန အကြီးအကဲတို့ ဒီကနေ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းမှာ လုံခြုံရေး တပ် အင်အား အလွန်အကျွံသုံးစွဲမှုကြောင့် ဥရောပ သမဂ္ဂ၊ နောက် သမဂ္ဂ အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေက မြန်မာ့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့ တပ်မတော် အကြီးတန်း တာဝန်ရှိသူတွေကို ဖိတ်ကြားမှု ဆိုင်းငံ့ထားမှာ ဖြစ်သလို လက်ရှိ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကိုလည်း ပြန်လည် သုံးသပ်မယ်လို့  ဥရောပ ကောင်စီက ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ဒုက္ခသည်စခန်း UNHCR စရင်းကောက်ခံ
လူဦးရေ သိန်းနဲ့ချီပြီး အဆမတန်များပြားနေတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနယ်စပ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ UNHCR ကနေ တရက်ကို မိသားစု ၄၀၀၀ နှုန်းနဲ့ အမည်စာရင်းတွေ စတင်စုဆောင်းကောက်ယူနေပါတယ်။ မအင်ကြင်းနိုင် က အပြည့်အစုံ တင်ပြထားပါတယ်။
သတင်းအကျဉ်းချုပ် ၁၀. ၁၆. ၂၀၁၇
နေပြည်တော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှာ မနေ့ကလက်နက်တချို့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနဘက်ကနောက်ဆက်တွဲစစ်ဆေးနေပြီး လက်နက်တွေထပ်မံသိမ်းဆည်းရမိ…စသည်
မြန်မာ အစိုးရ အားကစားဝန်ကြီးဟောင်းရဲ့သား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းထံကနေ ပစ္စတို သေနတ် ၇ လက်၊ ကျည်မျိုးစုံ ၉၀၀ နီးပါး၊ လက်ဖြောင့် သေနတ်သမားသုံး မှန်ပြောင်းတလက်၊ WY စာတမ်းပါ စိတ်ကြွ မူးယစ်ဆေးပြား ၁၂ ပြား၊ ICE မူးယစ်ဆေးဝါး ၁ ဒသမ ၅ ဂရမ် ဖမ်းဆီးရမိထားပါတယ်။